Monthly Bonus For August 2020 ? Crown ? New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 30,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB-000048) နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 25,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Myat Phoo Zaw (FB-000018) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Crown Agent တို့ August လအတွင်း New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 30,000 ကျော် နှင့် အထုပ် 25,000 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Crown အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ? Bonus New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 30,000 ကျော် ရောင်းချသော Agent အတွက် ? ငွေသား (77) သိန်းကျပ်တိတိ နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် (1,500) New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 25,000 ကျော် ရောင်းချသော Agent အတွက် ? ငွေသား (60) သိန်းကျပ်တိတိ နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် (1,250) နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For August 2020 ? Crown ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 5,400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB-000048) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Yu May Aung August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 5,400 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Crown အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (19) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Crown ? Beaute Cafe အထုပ် 2,400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Htet Htet Aung (FB-000011) နှင့် Beaute Cafe အထုပ် 2,200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Moon Enzali Kyi Myint (FB-000045) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Crown Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 2,400 ကျော် နှင့် အထုပ် 2,200 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Crown Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Beaute Cafe အထုပ် 2,400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့အတွက် ?ငွေသား (25) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ Beaute Cafe အထုပ် 2,200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့အတွက် ?ငွေသား (24) သိန်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 3000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Khaing Myat Oo (FB000052) Zu Mon Hlaing (FB000152) Thae Thae (FB000004) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Crown Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 3000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (19) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 4000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Zin Zin Yu (FB000530) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Zin Zin Yu !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 4000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (24) သိန်း (3) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 5000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Ei Ei Thae Po Khin Saw (FB000014) Myat Phoo Zaw (FB000018) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Crown Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 5000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (31) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။